TUSMO: Qoys Dumay Qaran Ma Dhisaa? | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Aqoon Guud TUSMO: Qoys Dumay Qaran Ma Dhisaa?
TUSMO: Qoys Dumay Qaran Ma Dhisaa?
Nasiib xumada Dalka Soomaaliya ku habsatey waa mid saameysay dhankasta oo nolasha ah, 24kii sanno ilaa hada la joogana kama soo kabanin waxana sabab u ah Dagaalladii sokeeye ee aafeyey Dalka iyo Dadkaba. Meesha ugu daran oo hada bulshada ka dhibantahay isla markasna dareenka ogaanshaha ka maqanyahay waa qoyska, waana meesha sarta ka qurunsantahay. Dad yar ayaa dareensan mise daraaseyey in Soomaalida halkey ka bukoontahay ay tahay qoyska, balse aan tiro laheeyn Dadka dhibaatadaas ka sheganaya mise samaynaya burburka reerka iyo Mas`uuliyad darrada ka dhex jirta.
Dal kasta sida qoysaskooda ay yihiin ayuu dalkana ka tarjumaya . Tusaale hadaan usoo qaato dalka Malaysia waa dal xornimadiisa qaatey 63dii, waxa uu naga dambeeyey saddex sano, waana dal Muslimiin dadkiisu u badanyihiin, aadna u qurxoon oo Aduunka looga dalxiis tago lehna horumar waxbarasho, siyaasad, dhaqan iyo dhaqaale, tiknoolijiya ku caan baxay, waxaana hogaamiya u ah madax muslimiin ah. Burburka qoysaska Malaysia ayaa daraasad laga sameeyey waxaa lagu sheegay in uu yahay qiyaasta furriinta 7%. Waa tiro aa du yar marka loo eego burburka ku yimaada qoysaska Soomaalida.
Hadaba Soomaaliya aan usoo noqonnee % maalintii kaliya meeqa qoys ayaa burbura iyada oo aysan xaquuq dhowris jirin? Waa Su`aale malaga sugayaa qoys burbursan in uu qaran dhiso? Carruur aan la daryeelin iyaga iyo hooyooyinkood maxa ka soo bixi kara? Ninkii gudan waayeyna muxuu hogaanka ka qaban karaa?
Aqristoow qisooyinka xanuunka badan ee reeraha Soomaliyeed dhaawacay oo aan nasiib u yeeshay inaan la kulmo ayaa idinla wadaagayaa. Layla waa Hooyo 22jir ah, waxa ayna leedahay wiil yar oo hal sano jir ah oo ay dhabarka ku sidatey iyo gabar 2 sano jir ah oo ay uga soo tagtey islaan daris wadaag yihiin. Waxaan isku aragney Gaari loo yaqaano `Caasi/ Hoomey` oo Degmooyinka Muqdisho ka shaqeeya, waxa ayna gaari kasoo raacdey Degmada Wadajir ee Suuqa Waynaha Madiina. Waxa ay xambaarsantahay ilma oo ooynayey. Marka ay fariisatey ayey ku tiri: `Aamus Aamus Mama’. Xooga markii uu gaarigi socdeyba ilmihii oohin iyo fara ruugis ayuu bilaabay. Iyada oo ka gubaneysa oohinta ilmaha yar, hadana ku eegeysa il naxariis ah ayay dhunkatay oo ku tiri “Aabahaaga ayaa kaa inkaarsaday ee asaga habaar!”
Layla marka ay sida dhahayso waxaan isla fadhinna kursiga dhexe ee gaariga aniga iyo gabar kale. Aad ayaan isugu dhaweyn. Waan la yaabey hadalka ay Ilmaha yari ugu jawbayso. Waan eegay, waxaana arkay iyadii oo afkeeda afkiisa u gelisay oo bishinteedi ku aamusinayso sidii Naaska oo kale isagiina uu ruugaya!! Waxan bilaabay inan wareysto intii yareyd ee aan gaari saarneyn. Waxa ay ii sheegtay inaysan lahayn aabe & hooyo oo ay marhore dhinteen. Ayeeydeed oo soo korsatayna ay geuurkeda kadib geeriyootey. Nasiib darro, ninkii ay guursateyna waa ay kala tageen. Waa nin maanta shaqeysta oo ku xamaasha mootooyinka saddexda lugood leh ee Bajaaj ama Tuktuk loo yaqaano. Ma ogola in uu carruurtiisa biisho. Ehelka ninkaasi waxa ay ka taqaannaa kaliya walaalkiis ka weyn, isagana waxa uu ku yiri ilmaha inaan kaaga celiyo ayaan awoodaa ee wax kale kuuma sameyn karo, biilna kaagama qaadi karo!!!
Layla waxaa kale oo ii sheegtay in ay shalay wax ay cunto ugu dambaysay, naaskeeda uusan caano lahyen, Lacagna wadanin oo ay hadda usoo baxdey in ay umada iska dhex gasho. Waxa ay soo aadey guri ay ku ogayd qoys ay u shaqeyn jirtay si bal ay raashin iyo caano ilmaha yar ugu soo hesho, waa haddii ay wali reerkii daganyihiin.
Runti aad ayaan ula yaabey. Waxa aan sameeyo ayaan garan wayey, lacag fiican ma aanan wadan balse lacag yar oo Moobaylka EVC ahan iigu jirey ayan u tuurey si ilmaha Caano ugu iibiso walow aan ogahay baahideeda wax weyn u qabaneynin.
Aqristayaasha qiimaha lahoow Mas`uuliyadaas Ninkaasi lumiyey Yaa mas`uul ka ah? Ubadkaasi Xuquuqdii uu lahaa sidaas layeelay berri muxuu noqon karaa? Hooyadii aan la daryeelin, ladayacay oo la dulmiyey habaarkeedu halku gaari karaa?
Diinteenna suuban su`aal miyaa ka taagan inay xuquuqdooda cadeysay iyo inkale? Xaasha Lilaah xitaa waxay cadeysay in Hooyada looga ijaaro naaskeeda iyada oo ubadkeeda yahay. Ragga mas`uuliyadaas lumiyay halkee ayay ka galayan xisaabta Alle iyo cuqubada adduun?
Run ahaantii, waxa burburka looga kabsan la`yahay waxaa kale oo ay noqon kartaa waxaa meesha ka maqan dowlad daryeesha Qoysaska burbura ama haweenka aan haysan cid ka kaalmeysa korinta ubadkaas. Maxkamad kala xukmisa, hadii laheli lahaa ayaa xal fican noqon lahayd. Waxaa kale oo kaalin wayn inay ka qaatan ka gaabiyey Warbaahinta oo ah meesha ugu wayn ee bulshada wax looga gudbin karo. QOYS Dumay QARAN ma dhiso! Ee Soomaaliyeey QOYSka halloo kaco oo hooyooyinka xuquuq u qalanto halla siiyo!!
Qalinkii: Raxma Isaaq
Previous articleCadadkii 18aad ee Xaqiiqa Times
Next articleSoomaaliya oo 25 kadib Baareysa Tayada Badeecooyinka Soo Gala Dalka